SAWIRRO: Khasaaraha ka dhashay weerarkii Hotel Maka Al-Mukarama maanta | Gaaloos.com
Home » News » SAWIRRO: Khasaaraha ka dhashay weerarkii Hotel Maka Al-Mukarama maanta
SAWIRRO: Khasaaraha ka dhashay weerarkii Hotel Maka Al-Mukarama maanta
Dowladda Soomaaliya ayaa si rasmi u shaacisay in la soo afjaray howlgalkii Hotelka Maka Al-Mukarama, oo qaatay in ka badan 15 saacadood, kadib markii shalay gelinkii dambe ay Al-Shabaab weerar ku qaaday oo gudaha ay u galeen rag hubeysana.
Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa sheegay in weerarkaas ay ku dhinteen 14 ruux oo afar ka mid ah ay ahaayeen ciidamada ammaanka, afar shacab ah, labo mas’uul dowladda ka tirsan oo uu ku jiro Safiirkii dowladda Soomaaliya u fadhiyay Geneva iyo saddex ka tirsan Ilaalada Hotelka.
“Howl galkaas waa la soo afjaray, kooxo ka tirsan argagixisada oo ku hubeysnaa qoryo, bambooyin iyo tooreeyo ayaa soo galay Hotelka, waxay doonayeen in dadka Hotelka ku jira ay afduub u qabsadaan, qaarna ay gowracaan, laakiin ciidamada amniga ma siin fursadaas”ayuu yiri Maareeye.
Sidoo kale Maareeye ayaa xusay in dad ka badan kontan ruux ay ciidamada soo bad baadiyeen, isla markaana afar ilaa shan ay ahaayeen raggii hubeysnaa ee hotelka galay, waxaana uu intaa ku daray inay doonayeen in sidii Westgate oo kale ay Hotelka Maka Al-Mukarama ay heystaan.
Wararka ayaa intaa ku daraya in meydadka qaar ka mid ah kooxihii weeraray Hotelka la soo dhigay dibada hotelka, kuwaasoo ku labisnaa dharka ciidamada, waxaana weerarkan lagu qaaday Hotelka Maka Al-Mukarama uu yahay kii saddexaad.
Dhinaca kale Maamulaha Hotelka Gurey Xaaji ayaa sheegay in mas’uuliyada weerarkaas uu dusha uga tuurayo Gudoomiyaha degmada Hodan oo u diiday in wadada hor marta Hotelka uu ka sameysto bar uu ka ilaaliyo, taasna marar badan uu ka hor-istaagay sida uu yiri.
Weerarkii lagu qaaday Hotelka Maka Al-Mukarama ayaa ahaa kii ugu waqtiga dheeraa, marka loo eego weerarada ay Al-Shabaab ku qaadi jiraan xarumaha dowladda iyo goobaha kale ee ay horay u weerareen, kuwaasoo saacado lagu kala bixi jiray.
Title: SAWIRRO: Khasaaraha ka dhashay weerarkii Hotel Maka Al-Mukarama maanta